Iimpawu zezikhwama ze-ski kunye ne-overalls
Izikhwama ze-ski suit and suit 2015-2016
Ukukhetha i-suit suit skiing suit, fashion 2014-2015
Kubantu abaninzi, ukuphumla okusebenzayo kuyindlela kunye nendlela yokuphila. Kwiminyaka emininzi i-ski resorts igcina uphawu, ukhangela amaqela amaninzi e-adrenaline kunye nokuzonwabisa kwebusika-i-snowboard, i-skis. Le yeholide engenakuqhathaniswayo ezisa ukuzonwabisa okukhulu, iye yathandwa kuluntu lwabafazi, kodwa kufuneka lilungiswe kakuhle, kuba ezi ziindawo zokuhlala ezitshatyalalisayo kunye ne-t-shirt ezinemikhankaso akuzona iingubo eziza kubakho kwixabiso. I-suit ski ski suit - yintoni efunekayo ngokwenene. Ziziphi iimpawu zentambo ye-ski ehambayo kwimisebenzi yangaphandle kufuneka uyibeke ingqalelo kunye nendlela yokuthetha ngayo ukuthenga esi sambatho esibalulekileyo nesimfuneko, kwaye siya kuthetha.
Iimpawu zezikhwama zebhakabhaka zika-2015-2016 - yintoni okumele uyikhangele?
Kutheni kungekhona ijaji eqhelekileyo esasigqoba kuyo kwidolophu kwaye isindisa nakwi -20? Kulula, ezitrato zakho, ngokuqhelekileyo, ungahlali ekhephu, ungagqithisi okanye ungene kwi-snowboard, ungagungqi (ngenxa yoko ukukhupha ngokukhawuleza ukupholile kwaye ukhululeke) kwaye ekugqibeleni, ukulungelelana nokuthuthuzela akubalulekanga kuwe, kuba umsebenzi osebenzayo unobumnene kakhulu. Konke ngokuthe ngqo, xa uya ezintabeni. Ukongezelela, i-suit suit yebhinqa, akuyithengi olunye uhambo, kulungele ukugqoka kunye nezitalato ezigqutywe ngekhephu zedolophu yakulo. Ngoko ukufunyanwa kubalulekile ngokufanelekileyo kwaye ixesha elide.
Xa ukhetha ubusika ngokubanzi, ibhinqa kufuneka ilithobele kwaye ithathe umdla kumaphuba alandelayo:
Yintoni ukunyanzelwa kwamanzi kweso sithuthi? Kwizambatho ezikhethekileyo zasebusika zikhona i-coefficients, kwaye abathengisi bazi malunga nabo. Inani eliqhelekileyo livela kwi-5000 m. Ngokubanzi, iphakamileyo isalathisi, ngcono, kodwa kukho umbuzo wezemali, ixabiso liya kukhula;
Uphi ukuphelelwa komphunga kweso sithuthi? Kwakhona, kukho izalathisi ezikhethekileyo kwiimitha zamitha kwi-square meter yeethambo ngosuku. Ukuze ungavali intloko yakho kakhulu, yazi nje ukuba akufanele ibe ngaphantsi kwe-5000 mm / sikwere. m nge-24 h. Ukuba uhamba okokuqala ngeholide, uze uzame ukhetha i-suit kunye neziboniso ezivela kwi-7000. Kwiintaba, ukushisa kunye nemozulu - into engento enqabileyo. Kukho imvula, i-sleet, umoya oqinileyo-oku kuqhelekileyo kwaye kwiimeko ezininzi zezulu zithandwa kakhulu nge-skiing.
Qaphela ukuba i-hood ingagqitywanga. Oku kubalulekile, kuba ukuba kungenjalo, i-helmet ingaqhotyoshelwanga. Akusiyo imbopheleleko, kodwa xa kuthengwa i-snowmobile ride. Akuyi kuba mnandi ukuba, ngenxa yeso sifo, awunandipha uhambo;
Ungakulibali ukuba i-ski suit for a woman is just a jacket and a bants, kodwa kunye neengubo zangaphantsi zomoya. Ngokuchasene nenkolelo eninzi, ayikufudumala, kodwa iyasusa umswakama xa usuka. Umphumo wokufudumala uyadalwa, kuba ulusu luya kuhlala lumile. Ngokubanzi, nayiphi na ingcali izakuthi into iyimfuneko.
Umgaqo-nkqubo wexabiso kunye neendlela ezintsha zezinto zokuhamba nge-ski kubafazi
Isetyenziso esipheleleyo sokugqoka, kuquka neengubo zangaphantsi zentsimbi, kunokufumana ipenki enhle. Iprofi ikhetha amanqaku aqinisekisiwe, kodwa kwi-model-16 ye-2015-16 ininzi inomdla, ikhululekile kwaye i "thobekile" kwixabiso lemifanekiso, leyo, ukuba ingekho ngaphantsi komgangatho, ayibalulekanga. Bhala zonke iimpawu - ishishini elingeneliseko. Unokwazi nje ukuba nakwiRashiya benza izikhwama ze-ski zeemodeli zowesifazane - uMgcini. Amagama ayinyaniso kwabanye ... i-Vasilisa imodeli, kwaye akukho nto iqinisekileyo ekusebenzeni kwekhwalithi. I-200-300 yeeMpuma zeMpuma kuzo zonke eziyinkimbinkimbi. Oku kuninzi kubiza, ngaphantsi kunokukrokra.
Unganqikazi kwaye uqiniseke ukuba ulinganisa konke ukuthenga kwakho kwikiti. Akukho nto kufuneka imise ukunyakaza. Ngaphantsi kweengubo zangasese ziqinile, zingenazo iifolda, i-hood-okanye i-detodable, okanye enye inokufihla ngasemva kwekholeji, kwaye nokuba bhetele yinto eyancipha ngokukhawuleza ngobukhulu bentloko yakho, igubuzele. Inhlanhla ekukhetheni i-suit suit. Yiba nokuphumla okuhle!
Iimpahla ezenziwe ngefestile ehlobo ehlobo 2016: Ukuhlaziywa kwamanqaku anje
Eyona nto ibhetele - eyona nto ibhetele: ama-pantsuits amahlanu ama-Mezzatorre kwi-fashionistas
Iziphakamiso zokukhetha ingubo yowesifazane ekwindla ka-2015
Izambatho zeofisi eziseTyhini
Indlela yokukhetha ibrasi
Ijeyethi ye-jacket-down jacket: ezine zizathu zokuzithenga ngokukhawuleza
Izindlela zamanje: unyango lwe-PMS
Umtshato weNtombi kaPutin waba ngumkhangeli omkhulu kuMarrakech
Kutheni amaqabunga aphuzi kwikhukhamba? Qonda ukuba wenzeni ngamagqabi aphuzi?
Isiganeko sonyaka omtsha kubantu abadala: kumnandi kangakanani ukuchitha uNyaka Omtsha 2015
Indlela yokudala isibini esipheleleyo
Indlela yokukrazula i-crusts entloko yentsana
Iipotcake zepatato ngegalikhi
Izindlela ezi-6 zokufumana emva kokuqeqeshwa kwamantombazana
Isalathisi esingunaphakade - isimboli ka-Meyi 9, amanqaku anomdla kwaye alula ayenziwe ephepheni
Izipho zoNyaka omtsha zabantwana 2009-2010
Iimpawu ezintle zokubandezeleka kunye neengcinezelo
Isonka seBlueberry kunye ne-zucchini
Ulwaphulo lweentlobo zokungaphumeleli komntu
Iingcebiso ezimbalwa zokulwa ngokukhawuleza ebusika
Ukunyamekela ngoncedo ehlobo